Isicacisi esiNcedo soMlo oMninzi entliziyweni ka'Kapteni Marvel ' - Iimuvi
Ngoobani iKree kunye ne-Skrulls? 'Ocacileyo uKapteni' uMcacisi.
Ngelixa kubonakala ngathi iMarvel Cinematic Universe igubungele ii-intshi zayo zobubanzi be-comic ngaphezulu kweefilimu ezingama-20 (kunye nokubala), kusekho imigca yamabali ebalulekileyo ekusafuneka ijongiwe. Kwaye nge UCaptain Marvel Ukuza ngolwesiHlanu, ekugqibeleni siza kufumana iMCU ithathe iKree kunye neSkrulls. Ngelixa i-Kree kunye ne-Skrull ivakala njengamagama eebhendi ezimbini ze-grunge, eneneni ziintlanga ezimbini ezilwa nabasemzini ezingundoqo kumgca webali ophambili we-MCU. Ngokukrakra.
Nokuba zonke ezi zinto ze-Kree-Skrull zivakala zinomtsalane kuwe, okanye unethemba lokubona indlela UCaptain Marvel idlala kwisiqwenga se Abagibeli: Umdlalo wokugqibela , Olu hlanga ludityanisiweyo nolunye uhlanga luyinxalenye enkulu yomdlalo bhanyabhanya kwaye lufuna umxholo omncinci ngaphaya kolu banzi, Umzuzu omnye ucacisa uMarvel ebonelelwe ngoFebruwari. Ke nantsi i-primer eluncedo kwi-Kree, i-Skrulls, imfazwe yabo yeenkulungwane, kwaye ingena njani kwi-MCU ngokubanzi. (Abonakalisa kakhulu ukukhanya UCaptain Marvel ngaphambili. Ukuba ufuna ukuhlala ebumnyameni ngokupheleleyo ngaphambi kokubona imovie, mhlawumbi yeka ukufunda. Ukuba ufuna ukuqonda ngcono ukuba kwenzeka ntoni kwimovie, nangona kunjalo, qhubeka.)
I-Kree luhlanga lomkhosi wasemzini ovela kwiplanethi engu-Hala, okhokelwa yinto ebizwa ngokuba yi-Supreme Intelligence. Kumahlaya, Ubukrelekrele obuPhezulu, ngokuyintloko, yintloko enkulu edadayo etankini eyasekwa kubume beengcinga ezinkulu zohlanga ngaphambi kokuba basweleke. (Khawufane ucinge ukuba uSocrates kunye namakhwenkwe akhe akrelekrele adibanisa kunye, emva koko baba yintloko enkulu kwingqayi enkulu.) In UCaptain Marvel , Ubukrelekrele obuPhezulu buvela phambi komntu ngendlela yomntu abamaziyo; kaCaran Danvers kaBrie Larson, ngumlinganiswa odlalwa nguAnnette Bening. Kungenxa yokuba nangaliphi na ixesha ungahamba nomtyunjwa uOscar amaxesha amane endaweni yentloko enkulu yeCGI ejikelezayo engqayini, kuya kufuneka uyenze.
phumelela imali ngokudlala i-trivia
I-Kree's physiology ifana nokomzimba womntu, ngaphandle kwesikhumba esiluhlaza, oko kuthetha ukuba uMarvel unokuqhwaba nje ipeyinti eluhlaza okwesibhakabhaka kubadlali. Nangona kunjalo, akunjalo konke I-Kree inesikhumba esiluhlaza okwesibhakabhaka: Kwii-comics, i-bluer isikhumba, i-Kree ecocekileyo ngakumbi, kodwa i-MCU ibonakala iyayikhusela loo mthetho, ukuba kuphela ngenxa yokuba i-studio ayifuni ukugubungela uJude Law, odlala ijoni laseKree uYon -Rogg, ngepeyinti eluhlaza okwesibhakabhaka kuyo yonke imovie. Ngokuyinxenye ngenxa yentiyo yabo kwi-Skrulls (ngakumbi emva koko), i-Kree yayijongene nokudala ama-Inhumans-abantu abavavanywa zizazinzulu ze-Kree, bafumana amandla abo, bahlala kwinyanga. Ama-Inhumans ayengumboniso woluhlu lwee-TV zabo kwi-ABC, kodwa bahlala okwexesha nje ngenxa yokuhlelwa kakubi kunye ukugculelwa okunzulu .
Kwi-MCU, sidibene neKree ezimbalwa kwiscreen esikhulu ngaphambi- UCaptain Marvel . URonan uMmangaleli (idlalwe nguLee Pace), oyena mntu uphambili kwi Abagcini beGalaxy , wayeyiKree radical, kunye noKorath the Pursuer (Djimon Hounsou), omnye wabangaphantsi kukaRonan. (Kufanelekile ukuba sikhankanye ukuba ngelixa u-Yondu kaMichael Rooker enesikhumba esiluhlaza, akanguye uKree, kodwa uyi-Centaurian -kwaye noNabula kaKaren Gillan, oyi-Luphomoid. Zininzi iintlobo zezinye iintlanga ezinolusu oluhlaza okwesibhakabhaka; iMarvel iqulethe izihlwele.) URonan noKorath nabo bavela kwi UCaptain Marvel , kuba yinto yokuqala.
Ngokubhekisele kuCaptain Marvel uqobo, uCarol Danvers ngumxube weKree kunye noluntu. Saziswa kuye xa elilungu le-Starforce- ngokusisiseko, inguqulelo ye-Kree yeqela le-ops emnyama, elikhokelwa ngu-Yon-Rogg- kunye ne-crux ye-movie ngumlinganiswa osokolayo ngawo omabini amacala esazisi sakhe kunye nendlela unokuba ligorha kubantu abafuna ukonga kakhulu. Ukutyhila okungaphezulu koku kungonakalisa isimanga, kwaye andisosilo. (Ndi kanjalo andifuni ukuba uMarvel andizingele njengo-Lee Pace onomsindo kwipeyinti eblue.)
I-Skrulls ziye zasebenza njengeyona nto iphikisayo kwi-Kree, kwaye ngelixa benesikhumba esiluhlaza kunye neendlebe, iindlebe ezinje ngeSpock, eyona nto ipholileyo kukukwazi ukubumbela nakweyiphi na into yebhayoloji. Kubalandeli beMCU ababengazi ngaphambili nge-Skrulls 'shapeshifting acumen, ngalo mzuzu ukusuka Ekuqaleni UCaptain Marvel erhuqwayo -Ukuba uBrie Larson athabathe ngokupheleleyo ixhegwazana elidala elimnandi kwindlela engaphantsi komhlaba-kusenokwenzeka ukuba bekubhidisa kakhulu. Kodwa ungakhathazeki, wayebetha ngenqindi iSkrull.
I-akhawunti ye-twitter e-fake ye-kevin
Kuba i-Skrulls ayinamandla njenge-Kree, ukwenziwa kwe-shapeshifting kuluncedo olukhulu ekuphepheni nasekukhohliseni iintshaba zabo-kwaye kuhle kakhulu ukwazi i-WHO inokuba yimfihlo yeSkrull. Njengoko uCarol echaza kwimovie, enye indlela yokuxelela ukuba ujongana noSkrull ozenza umntu omaziyo kukubabuza imibuzo malunga nemvelaphi yabo. Nokuba kungasiphi na isizathu, i-Skrull inokufumana kuphela iinkumbulo zamva zabantu abaziphatha kakubi. Ngokuqinisekileyo licebo elinobukrelekrele, elingaqhelekanga kunokuba libethe nje ngenqindi bonke abemi abadala. I-Skrulls yaziswa kwi UCaptain Marvel zikhokelwa nguTalos (Ben Mendelsohn), ojika phakathi kwesithethi saseMelika xa ezenza uBen Mendelsohn-okhangeleka njengomntu kunye nomlingisi weAussie accent xa ekwifom yakhe yeSkrull. (Oku akuzange kubonakale ngokupheleleyo iyimfuneko , kodwa ukuba uBen Mendelsohn ufuna ukungxama ngee-aksenti ezininzi, kuya kufuneka umyeke.)
Ngenxa yokuba iiSkrulls zinokutshintsha zenze nawuphina umntu, bebephantsi kwemigca ethile yamaqhinga ahlekisayo anje ngo-2008 Uhlaselo oluyimfihlo uthotho, apho kutyhilwa ukuba ngokuthe ngcembe amaqhawe amaMarvel athathelwe indawo yiSkrulls. Luhlobo lokonwaba, iminqwazi ye-tinfoil-hat eyenziweyo UCaptain America: Ijoni lasebusika kwaye amaNazi ayo ayifumene ngasese i-S.H.I.E.L.D. kwaye i Emva kwexesha uGarry Shandling uthi ikaka ngathi 'Isichotho Hydra' esidlangalaleni Isakhiwo siziva ngathi sisidenge, yelenqe elonwabisayo. Kwanele ukutsho ukuba i-Skrulls izakuxelisa abantu kwi UCaptain Marvel , eyongeza kuphela kumayelenqe.
Ke uthini ngale Mfazwe yaseKree-Skrull?
Kukho iimfazwe ezimbini zobuchwephesha zaseKree-Skrull-eyokuqala eyaziswa ngo-1971 kwimidlalo yokuqala kaMarvel Abaphindezeli iiqhulo. Imfazwe yaseKree-Skrull yafakwa kwingxelo ekwabandakanya abaphindezeli kunye neZine eziMangalisayo, kunye negorha elinamandla laseKree uMar-Vell. (UMar-Vell wayenguCaptain Marvel wokuqala, ngexa uCarol Danvers wayeliqabane lakhe, nangona ekugqibeleni wayeza kuzithathela ngokwakhe ingubo kaKapteni Marvel.) Kule mpi, abakwaSkrull bade bazenza abantu kwizikhundla ezisemagunyeni kurhulumente-kubandakanya Ilungu leNdlu yeeNgwevu ebelijongene neKhomishini yezeMisebenzi yokuHamba ngaManye amazwe- ukuhambisa uluvo loluntu ngokuchasene neKree, kunye nabahlali ngokubanzi. Yile ndlela uMar-Vell avezwa ngayo njengeKree kwihlabathi, kwaye inxenye yeso sizathu sokuba uRonan uMmangaleli afune ukuba uMhlaba usebenze njengendawo yokumisela idabi laseKree-Skrull.
Yayililizwi lebali elonwabisayo eladibana nokudumisa okuninzi. Kwaye ngenxa yalonto, intsomi yaseKree-Skrull yandiswa kule minyaka ilandelayo, ichaza indlela ungquzulwano lweentlanga zabaphambukeli olwaqhubeka ngayo kumawaka eminyaka kwaye luchaphazela ngokuthe ngqo ilizwe leMarvel. Inguqulelo ye-TL; DR yile: iiSkrulls zazihamba galaxies zazisa itekhnoloji ephezulu kwezinye iindlela zobomi bamanye amazwe. Ukufika kwabo eHala, iplanethi ineentlobo ezimbini: iKree kunye neCotati. Abakwa Skrulls bagqiba kwelokuba babambe ukhuphiswano phakathi kwezi ndidi zimbini ukuze babone ukuba leliphi eliza kufumana ilungelo kubuchwephesha babo obuhle-xa i-Kree yaphulukana, bayitshayela iCotati ngokuziphindezela kwaye bafunga impindezelo ngokuchasene ne-Skrulls.
UCaptain Marvel isondela kufutshane neentsomi ze-Kree-Skrull ukusuka kwi-Marvel comics yasemva kwe-1971, mhlawumbi kuba kulula ukuyichaza kwincoko yababini engacacanga engazi okuninzi ngezi ntlanga zingaqhelekanga, kwaye nangenxa yokuba ingxabano yokuqala yaseKree-Skrull evela Abaphindezeli ii-comics azihambelani ncam nendlela i-MCU eyazisa ngokuthe ngcembe ngayo amagorha omeleleyo oMhlaba. (Ungayichazanga eyokuba aBane abaQhelekileyo abayikabi yinxalenye ye-MCU.) Qiniseka ukuba, kukho izinto ezithile ezivela kolu ngquzulwano kwifilimu-kubandakanya nentlanganiso yokuqala phakathi kweentlanga, nokuba zaba ziintshaba ezinjani, ezahlukileyo Iintsomi ezibekiweyo ezijikeleze abaphambukeli- kodwa ezi nkcukacha, ngokucacileyo, azikufanelanga ukonakala.
iiteyiphu zokuvuma izono
Ngaba Kukho Enye Into Endifanele Ndiyazi?
UCaptain Marvel Libali eliyintsusa lemvelaphi engaphezulu kwesifundo sembali yomlo wasemzini, kodwa kubalulekile ukuyazi loo nto UCaptain Marvel izokwazisa abaphulaphuli a Isithathu iintlobo zasemzini. Goose, ikati kaCarol yezilwanyana zasekhaya, ayisiyiyo, ke, ikati. I-Goose yi-Flerken, uhlobo lwangaphandle olwenzeka nje ukuba lubukeke njengekati eqhelekileyo yasekhaya. Uya kuthandana ngokukhawuleza noGoose-kwaye yiloo nto kuphela ekufuneka uyazi.
Ngaphandle koko, ngelixa i-minutiae yongquzulwano lwe-Kree-Skrull isenokungaguqulelwa kwiscreen esikhulu-iinkcukacha ezimnandi ze-Marvel comics kunqabile ukuba-yi-Kree, i-Skrulls, kunye ne-Captain Marvel Igama lokugqibela kunye nezicwangciso zeMCU zeSigaba 4. Ukuba uKapteni Marvel uza kuba yinxalenye yeAvengers kwaye asindise uMhlaba kwizisongelo kwihlabathi liphela kunye nomnyele, ngokuqinisekileyo ungquzulwano lweKree-Skrull luza kuphinda ludlale. Kwaye nangona le ntsomi yelinye ilizwe inokubonakala ngathi iyathandeka kwaye ayimfuneko ngoku, kunokuba kubaluleke ngakumbi njengoko sisiya phambili. Ngaphandle kwe Thor , Ugqirha Strange , kunye Abagcini I-franchise, uMarvel ukwazile ukugcina izinto endaweni yomhlaba ukuza kuthi ga ngoku, kodwa ngoku, ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, njengamajoni angabaphambukeli nabaphangi abenziweyo, ii-cosplayers ezijongeka njengeSpock ziye zaziswa ngokusesikweni, isitudiyo sinethuba lokwandisa isikali se-MCU nangakumbi, kwaye ufumane into encinci yendalo kunye Okuninzi ubunzima.
UJohn travolta bhanyabhanya wamva nje
UDavid blaine wokwenyani okanye inkohliso
Tom cruise kunye nodliwanondlebe nodliwanondlebe
Ingoma sinead O'connor
patrick umhlanga rory mcilroy
wayemhle kanjani umichael jordan
Ngaba lil peep emo